सुमन गैरे, काठमाण्डौ, 2015/01/25
सानैदेखि फिल्मी स्वाभाव भएकी र त्यस्तै स्वाभावको परिवारमा हुर्केकी माला सुब्बा २३ बर्षमा आईपुग्दा हिरोईन भईन् । फिल्ममा आउनु भनेर सोच्न समेत नसकेकी मालालाई निर्देशक सुरज सुब्बाले फिल्म 'वान वे'मार्फत दर्शकसामु चिनाउने जमर्को गरेका छन् ।
आगामी फागुन १ गते रिलिज हुन लागेको फिल्म 'वान वे'मा माला नव अभिनेता सिद्धार्थ गुरूङको प्रेमिका बनेर देखिने छिन् । चिटिक्क जिउडाल मिलेकी उनै मालाले ठमेलको एक रेष्टुरेन्टमा फिल्मीखबरसँग अभिनय यात्रा र फिल्म गर्दाको अनुभव साटिन् ।
'फिल्म गर्छु भनेर सोचेको पनि थिईन', सिंगापुरमा जन्मेर उतै हुर्केकी मालाले थपिन्, 'सानोमा निकै नौटंकी थिएँ । साथीहरूले हिरोईन भन्ने जस्तै छस् भन्थे । अभिनय गर्न प्रेरित गर्थे । मेरो यो क्षेत्रमा आउने मन नै थिएन । अचानक आएँ । अहिले लाग्छ, यो क्षेत्र मेरै लागि हो ।'
राम्रै अभिनय गर्नसक्छु जस्तो मान्ने माला भन्छिन्, 'म जहाँँ हुनुपर्थ्यो त्यहिं छु जस्तो लाग्दैछ ।' तरपनि उनलाई अभिनय गर्न सजिलो लागेन । आठ बर्षदेखि नेपालमै बस्दै आएकी सिंगापुरे लाहुरेकी छोरी नेपाली भाषाको समस्याले केही दु:खी छिन् । 'अभिनय राम्रो गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । भाषामा सुधार गर्दै जान्छु', कन्फिडेन्ट देखिईन् ।
राम्रो कलाकार भएर चिनिने लक्ष्य राखेकी मालाको सपना गज्जबको छ । सानोमा सुनिल सेठ्ठीको फ्यान अहिले सलमानको । उनै सलमानसँग आईटमा डान्स गर्ने उनको सपना छ । 'देख्ने सबै सपना पूरा हुन्छ भन्ने छैन तर आश भने मरेको छैन', उनले भनिन् ।
भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्ने तथा आफूलाई मायालु स्वाभावको ठान्ने मालाले 'वान वे'मा काम गरेर के सिकिन् त ? 'सबैभन्दा पहिला आफ्ना कमजोरी थाहा पाएँ । आदर गर्न सिकें । अभिनय बुझें अनी व्यवसायिकताको अर्थ बुझें', मालाले थपिन्, 'मैले यो फिल्म गरेर सन्तुष्टी प्राप्त गरेकी छु ।'
अहिलेको युवाको कथा भन्ने 'वान वे'मा माला 'सिद' नामको पात्रको प्रेमिका हुन् । रियल लाइफमा नै मायालु भन्न रूचाउने मालाले फिल्ममा पनि मायालु स्वाभाव रहेको सुनाईन् ।
फिल्मको बारेमा खुल्न थालिन् । रोमाण्टिक हुन थालिन् । सुटिङका बेला हल्का बोलचाल नहुँदा पनि किस गर्नु पर्दाको क्षण सम्झिईन् । 'शुरूमा किस सिन छ भन्दा गार्हो मानेकी थिएँ । पात्रभित्र हराउन थालएपछी रिसाको मान्छेलाई पनि किस गर्न गार्‍हो भएन', उनले हाँस्दै भनिन्, 'त्यसपछी सिद्धार्थसँग रिस मर्‍यो ।'
प्रेममा किस महत्वपूर्ण रहने भन्दै मालाले दर्शकलाई दुई पात्रको गाढा प्रेमको अनुभव गराउन लिप किस गरेको बताईन् । हातको कफी टेबलमा राखेर थोरै लजाउँदै भनिन्, 'मलाई किस गर्दा कुनै गार्‍हो भएन ।'
बेड सिन पनि दिन गार्‍हो लाग्दैन ? मेरो प्रश्न नसकिदै उनी तर्सिईन् । उनलाई समाजको चिन्ता छ । समाजले पक्षउनसक्ने सम्मको दृश्य दिन उनलाई समस्या छैन । 'समाजले स्विकार्ने र कलात्मक ढंगले जस्टिफाई गर्ने गरि बेड सिन दिन सक्छु ।' तर, उनलाई अधिकांश फिल्मकर्मीको सोच नै भल्गर लाग्छ ।